မွနျမာ့ဂဇကျ အယျဒီတာ့သငျပုနျး – ဧပွီ ၂၀၂၀ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » မွနျမာ့ဂဇကျ အယျဒီတာ့သငျပုနျး – ဧပွီ ၂၀၂၀
မွနျမာ့ဂဇကျ အယျဒီတာ့သငျပုနျး – ဧပွီ ၂၀၂၀
Posted by kai on Apr 10, 2020 in Editor's Notes, Myanmar Gazette |0comments
ဝဇ်ဇီတိုငျး၊ဝသောလီပွညျ ဘီလူးဝငျပွီး လူမြားသကွေပေကြျစီးကွသောအခါ ဗုဒ်ဓကွှတောျမူ၍ ရတနသုတျကိုဟောကွားတောျမူသညျ။
ရတနသုတျတှငျ “ဧတနေ သစ်စနေ သုဝတ်ထိ ဟောတု”ဟူ၍စာကိုယျအပိုဒျတိုငျး၌ပါသညျ။ “ဤသစ်စာစကားကွောငျ့သတ်တဝါအမြားခမြျးသာကွပါစေ။” ဟူ၏။
ယခုကမ်ဘာ့ကပျရောဂါအဖွဈရောကျခဲ့သော COVID-19 ၏ သမိုငျးလိုကျပါလြှငျ အမှနျမပွောထိနျခနြျခွငျးကွောငျ့ လူတို့အသကျ မြားစှာဆုံးရှုံးရသညျဟုသိပါလိမျ့မညျ။ ဇတျလမျးစုံခငျးပွပါမညျ။
ခြိုငျးနားအစိုးရ၏တရားဝငျမှတျတမျးမြားအရ ကိုရိုနားဗိုငျးရပျဈ၏ (လကျရှိ)လူနာသုညမှာနိုဝငျဘာလ၁ရ ၂၀၁၉ဆေးရုံတကျHubeiဒသေသား အသကျ၅၅နှဈအမြိုးသားဖွဈ၏။
ထိုမှရောဂါပှားမြားကူးစကျနပွေီးနောကျ လူနာပေါငျး (၁၈ဝဦး) ရှိသော ဒီဇငျဘာ၂ရရကျနေ့တှငျ ခြိုငျးနားအစိုးရသညျ ဒသေဆိုငျရာကပျဘေး epidemic အဖွဈကွညောသညျ။
ဒီဇငျဘာ ၂ရရကျနေ့တှငျ ဝူဟနျမွို့ဆေးရုံ၏အရေးပေါျဌာနမှဆရာဝနျ Dr Ai Fen သညျ SARS ကဲ့သို့ဖြားနာရောကျလာသူလူနာမှတျတမျးကွညျ့၍ မိတျဆှမေိတျဆှေDr Li Wenliangကိုပွောရာမှတဆငျ့ WeChat တှငျပွနျ့နှံ့သှားခဲ့သညျ။ ထိုနောကျ ဒီဇငျဘာ၃၁ရကျတှငျမှ ခြိုငျးနားအစိုးရမှ WHO ကိုတရားဝငျအသိပေးခွငျးဖွဈသညျ။
ဇနျနဝါရီ ၅တှငျ ခြိုငျးနီဈးပညာရှငျမြားသညျ ဗိုငျးရပျဈ၏ဂြီနုနျးဗီဇတှကျခကြျသိရှိသောျလညျး မကွညော။ ဇနျနဝါရီ၁၃တှငျမူ ခြိုငျးနားပွငျပ ထိုငျးနိုငျငံ၌ပထမဆုံး ကိုဗဈလူနာအဖွဈတှေ့ရှိသညျ။ ဇနျနဝါရီ ၁၅တှငျ Chinese Disease Control Emergency Centers မှ “risk of human-to-human transmission is low”. ဟုတီဗီမှတဆငျ့ကွညောသညျ။ ဇနျနဝါရီ ၂၃ နှဈသဈကူးရကျနီး၍ ဝူဟနျမွို့မှ လူ၅သနျးထှကျခှာသှားပွီးနောကျတှငျ ဝူဟနျမွို့ကို ပိတျစို့ခွငျးဖွဈသညျ။
အငျ်ဂလနျ၏ University of Southampton လေ့လာစမျးစဈမှုအရ ခြိုငျးနားမှ ၁-၂-၃ပါတျစောကွညောခဲ့ပါမှုကမ်ဘာသို့ကူးစကျနှုနျးအား ၆၆-၈၆-၉၅%အထိလြော့ကနြိုငျသညျဆိုပါသညျ။
ခြိုငျးနားမှ အခြိနျနောကျကကြွညောခွငျးနှငျ့ ကူးစကျ/သနှေုနျးစာရငျးကို အမှနျအတိုငျးအသိမပေးခွငျးတို့သညျ ကမ်ဘာ့ရောဂန်တရကပျကွီးဖွဈရခွငျးအကွောငျးဖွဈပါ၏။ ( ထိုစဥျကာလက တိုကျရိုကျစဈဆေးစကျနှငျ့ သဆေုံးခွငျးအကွောငျးအရာကို တိကစြှာသိနိုငျသညျ့ နညျးပညာမသိသေး)။ မတျလ၁၁ရောကျ၍ ကမ်ဘာနိုငျငံပေါငျး၁၁ဝကြောျကူးစကျပွီးမှ WHO သညျ COVID-19 အားကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ Pandemicအဖွဈကွညောခဲ့သညျ။
Ground Zero မူလဘူမိမွေ၏ ကူး/သေ/ပြောကျကငျးအခကြျအလကျကို ကွညျ့ကာ အခကြျအလကျအဖွဈအရယူ ဆေးပညာရှငျတို့ဒတောသှငျးတှကျခကြျ နောငျမညျသို့မညျပုံရငျဆိုငျရမညျတှကျခကြျရသညျဖွဈရာ မူလပေးထားခကြျအမှားမြားကွောငျ့ မိုဒယျတှငျအဖွထေုတျမှားယှငျးခွငျးသို့ရောကျလသေညျ။ နိုငျငံနိုငျငံရေးသမား/ခေါငျးဆောငျမြားကလညျး ပညာရှငျထုတျမိုဒယျအရသာခနျ့မှနျးရ၍ ကိုဗဈရောဂါကိုမြားစှာအထငျသေးခွငျးရောကျကွရကာ ထိုအထဲ သွစတေးလြှမှသညျ ဥရောပတလှားနှငျ့ သမ်မတထရမျ့သညျလညျး အပါအဝငျဖွဈ၏။
သမ်မတထရမျ့မှ ဇနျနဝါရီ ၃၁တှငျ ခြိုငျးနားမှအမရေိကအဝငျ လယောဥျခရီးစဥျမြားကိုကနျ့သတျသောအခါ WHO မှဝငျရောကျစှတျဖကျမှုလညျးရှိကာ ထိုထိုသောအကွောငျးမြားကွောငျ့ သမ်မတထရမျ့မှ WHO အားဘကျဂကြျဖွတျမညျဟုလညျးကောငျး။ ဂပြနျဒုဝနျကွီးခြုပျမှလညျးကောငျး WHO ကို CHO ဟုခေါျရမညျအထိပငျဆိုခဲ့ကွသညျ။ အဆိုပါထိမျခနြျမှုမြားတှငျ WHO လညျးတာဝနျကွီးစှာရှိပါသညျ။
ဧပွီလ၈ရကျနေ့တှငျ မူလဂရောငျးဇီးရိုးဝူဟနျသညျလညျး ကူးစကျသူမရှိမူ၍ပိတျဆို့ထားခကြျမြားအလုံးစုံဖယျ ဖှငျ့လိုကျပွီကွညောသညျ။
နိုငျငံရေးဇတျခုံနှငျ့ စီးပှားပကြျကပျဆိုကျခွငျးတို့ကားပွီးဦးမညျမဟုတျ။ ကိုဗဈခတျေငွိမျအေးခြိနျတှငျ စနဈတကြ လေ့လာပွနျရေးပါလိမျ့မညျ။ ထိုထိုအခကြျကိုမူတညျ၍ Domino effectကဲ့သို့တခုလဲ၍ ဆငျ့ဆကျလာမညျ။ ကိုဗဈကမ်ဘာရောဂန်တရကပျသညျ လူသားတို့ကိုမညျသညျ့သတငျးစကားပေးခငြျသနညျး။ လူသားတို့သခြောမသိသေး။ အသကျရှငျရပျတညျရာရရေးရုံးကနျဆဲကာလဖွဈပါ၏။
120nm RNA ဗိုငျးရပျဈအစှမျး
လူသားတို့၏အသကျရုအငျ်ဂါအဆုတျကိုထိခိုကျစသေော ကိုဗဈ-၁၉ရောဂါသညျ ကမ်ဘာ့စကျရုံကွီးမြား၏ကုနျထုတျလုပျမှုနှငျ့ ရုပျကွှငျးလောငျစာဖွငျ့ မောငျးနှငျရသညျ ကား/သငျ်ဘော/လယောဥျမြားကို လုံးဝနီးပါးရပျတနျ့စလေိုကျရကား မွို့ကွီးမြား၏လထေုညဈညမျးမှုမှာ ၃၀%-၄၀% ထိကခြဲ့သညျ။ ကောငျးကငျဂွိုလျတုမှတျတမျးပုံမြားကွညျ့လြှငျ သနျ့ရှငျးကွညျလငျ ကမ်ဘာမွကေိုသိသာစှာမွငျနိုငျသညျ။
တနညျးအားဖွငျ့ မညျသညျ့နိုငျငံမြှလကျခံလိုကျနာမလုပျနိုငျသညျ့ ဖနျလုံအာနိသငျရှိဓာတျငှေ့တို့ထုတျခွငျးမှာ လမြားစှာရုတျတရကျထိုးကခြွငျးသို့ရောကျသညျ။ အမရေိကား၏စီးပှားရေးနှငျ့အတူ စကျရုံအလုပျရုံမြား ရကျပိုငျးအတှငျးဗွုနျးကနဲ့ ရပျလိုကျကွရသညျ။ ယခုထိမညျသညျ့မညျခြိနျပွနျဖှငျ့ရမညျပငျမသိရသေး။ တိုကျဆိုငျသညျလောမသိ ..
လူတို့အသကျရူခွငျးကို ဒုက်ခပေးသော အရှယျ 120nm ရှိSARS-CoV-2ဗိုငျးရပျအစှမျးဖွငျ့ 1 trillion cubic km ရှိ‌သောကမ်ဘာ့မွေ၏ လထေုသနျ့ရှငျးကွညျလငျရလသေတညျး။
World War Covid ကာလတူအတှငျးခြိနျကိုကျကလြြှကျ ရနေံစြေးအားပွိုငျမှုမြားဖွဈလာ၍ ကမ်ဘာအထုတျနိုငျဆုံးနိုငျငံကွီးမြားဖွဈသော အမရေိကား။ဆောျဒီအာရဗေနြှငျ့ရုရှားတို့၏ ရနေံစြေးနှုနျးမြားလညျးကဆြငျးလာရကား ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုကျထုတျခွငျး/ထှကျခွငျး၏အဓိက Factor ရနေံစီးပှားရေးသညျလညျးအကဖြကျပါ။ Climate Changeအတှကျ ‘point of no return’မရောကျအောငျ ကောငျးသောထုံးတမျးသဈကို ခရြေးရနျအခြိနျပါ။
ကမ်ဘာသို့ ထုံးတမျးသဈနိဒါနျး(New World Order)
တဦးနှငျ့တဦးဆကျဆံဆကျသှယျ ခစြျကွညျခွငျးအားဖွငျ့ ယဥျကြေးမှုမွို့ပွတို့တညျဆောကျထားသော လုသား၏မူလ ဆိုရှယျဘဝကို ကိုဗဈ‌ရောဂါက ပွောငျးပွနျလှနျခိုငျးနလေသေညျ။
လူတဦးခငြျးစီ၏နေ့စဥျသဘာဝ လူခငြျးနီးနားနထေိုငျမကြျလုံးခွငျးဆုံ စကားပွောခွငျး။ လကျဆှဲနှုတျဆကျခွငျး ထုံးတမျးမြားပြောကျမညျ။ တှေ့ဆုံပှဲနှငျ့အစညျးအဝေးမြား။စာသငျကွားရေးတက်ကသိုလျပညာရေးတို့လညျး အငျတာနကျနှငျ့ visual ထိတှေ့နိုငျစှမျးမရှိသော သဘာဝယောငျမြားခတျေခငြျးနငျးဝငျရောကျသှားမညျ။ ခရီးသှားလာ ကူးလူးဆကျဆံခွငျးတို့လြှော့ကဩှားနိုငျသလော?
ကပျသညျ ကမ်ဘာထုံးတမျးကို အသဈပွငျဆှဲနိုငျသညျ့တနျခိုးအားရှိသညျ။ ကမ်ဘာစဈခေါျသောသတ်တန်တရကပျဘေးသညျ ကမ်ဘာနိုငျငံမြား၏မွပေုံ(နယျနမိတျ) တို့ကိုအသဈဆှဲပေးခဲ့သညျမဟုတျပါလော။
ကိုရိုနားဗိုငျးရပျဈကိုနှိုကျသညျ အသကျကွီးသူမြား၏ခုခံအားလြှော့နညျးမှုကို အခှငျ့ယူကာ ပိုသတျ/သေ/ကူးစနေိုငျသညျ။
ယခုနောကျပိုငျးအခကြျအလကျကောကျယူမှုမြားအရ လူမညျးမြားတှငျ သိသာစှာအဖွဈမြား/လှငျ့ပါးသဆေုံးမြားသညျဆိုကွပွနျသညျ။
တဖနျ ကိုရိုနားဗိုငျးရပျဈသညျမူလမှမြိုးကှဲ ၃မြိုး ၈မြိုးစသဖွငျ့ကှဲပွားကာ လူ၏အသကျအားထိခိုကျနိုငျမှုတှငျ ဒသေရာသီဥတုလိုကျကှဲပွားသှားသညျ သိကွပွနျသညျ။
(ဥပမာဆိုရလြှငျ အမရေိကအနောကျပိုငျးသို့ရောကျသော ဗိုငျးရပျဈနှငျ့ အရှေ့ပိုငျးနယူးယောကျသို့ ဥ‌ရောပမှတဆငျ့ခံရောကျလာသောဗိုငျးရပျဈ၏ လူ့အသကျခြှနေိုငျအားမတူ)
လာမညျ့အနာဂါတျကမ်ဘာ Post WWC၏ ဓလေ့ထုံးတမျးသဈမြားရေးကွရာတှငျ ထိုသို့ခှဲခွားခကြျတို့ အမွုတခေံရမညျရမညျဖွဈရကား အသကျတနျး/လူမြိုးဇာတိနှယျခှဲခွားခွငျး၊ မတူလူ့အဖှဲ့အစညျးမြား/နိုငျငံရေးစနဈမြား ဒသေန်တရပိုငျးခွားရမှုမြားမွငျကွရနိုငျသညျ။
ကမ်ဘာစီးပှားရေးထိပျတနျးနိုငျငံကွီးမြား ၁-၂-၃-၄-၅သညျလညျး အစီအစဥျပွောငျးပါလိမျ့မညျ။ အလှယျပွောငျးမညျကားမဟုတျ။ တှနျးတိုကျရုနျးကနျမှုကွီးပါမညျ။
ရောဂါကပျကွရောကျပွီးလြှငျ အငတျဘေးဒုဗ်ဘိက်ခန်တရကပျသညျကလြှယျပါသညျ။ ယခုခတျေပငျ ကိုဗဈရောဂါကပျဘေးကွောငျ့လူသနျးပေါငျးမြားစှာအလုပျလကျမဲ့ဖွဈကွပွီမဟုတျပါလား။ ဆိုငျရာအစိုးရမြားကတိုငျးပွညျ၏ငှအေရငျးမြားစှာမွုတျခါ ကယျတငျနကွေရပရော ထိုကွားမှပငျ WTO ခနျ့မှနျးခကြျအရ ကမ်ဘာကုနျသှယျမှု (32%)အထကျအထကျကမြညျ။ Global GDP 1-2%ကမြညျဖွဈပါသညျ။
စီးပှားကလြြှကျ ပွနျကယျတငျနိုငျခွငျးမရှိလြှငျ အငျအားလကျနကျမြားသုံးကာ အပွနျအလှနျ အရငျးအမွဈလုပှဲမြားဖွဈလာနသေေးပရော ထိနျးညှိနိုငျခွငျးမရှိပါလြှငျ သတ်တန်တရကပျ၊ စဈပှဲကွီးမြားဘေးသို့အခြိနျမရှေးဆငျးသကျနိုငျလသေညျ။
နောငျရာစုနှဈမြားသို့တိုငျ ကနြျရဈပွောစမတျပွုကွပါလိမျ့မညျ။ မွနျမာနညျးကပျဆေးခွငျး ခေါျကောငျးခေါျ နိုငျပါမညျ။ သငျ/ကိုယျနှငျ့ ခစြျသောသူမြားမပါသှားပဲ ကမ်ဘာအကြိုးပို၍တိုး ဆောငျစခွေငျးငှာ
သစ်စာ-မှနျသောတရားကိုသာလကျကိုငျထားပါ။ သစ်စာတှငျကပျကြောျနိုငျသညျ့ စှမျးအားရှိသညျ။
သစ်စာတညျသောအခါဝယျ သွဇာလေးနကျ ပေါျဆီတကျသညျ။
Kai has written 1053 post in this Website..